I-Snapdragon 665, 730 kunye ne-730G: I-Mid-Range Qualcomm Processors | I-Androidsis
I-Snapdragon 665, 730 kunye ne-730G: Iiprosesa ezintsha zaphakathi kwebanga
I-Qualcomm iye yahlaziya uluhlu lwenkqubo yayo kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo. Ngenxa yoko, siye sabona abanye abatsha befika kwintengiso, njengeSpapdragon 712. Uphawu lwaseMelika, olulawula eli candelo kwi-Android, ngoku usishiya neeprosesa zalo ezintsha kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Imalunga ne-Snapdragon 665, 730 kunye ne-730G, Babizelwe ukuba banike iimfazwe ezininzi.
Ziyinxalenye yeeprosesa ezithi bahlaziya uluhlu lwangoku lweQualcomm. Ke bandise ukhetho phakathi kuluhlu oluphakathi kwi-Android. Nangona nathi sineprosesa ekhethekileyo. Kuba i-Snapdragon 730G yeyokuqala yophawu eyenzelwe ngokukodwa umdlalo.
Njengoko sibona rhoqo kwiiprosesa zohlobo, ubukrelekrele bokudlala budlala indima ebalulekileyo kubo. Kubalulekile kwezi Snapdragon 665, 730 kunye 730G. Apha sikuxelela yonke into malunga neprosesa nganye nganye. Ukubona ukuba iQualcomm isigcinele ntoni malunga noku.
3 I-Snapdragon 730G
Le processor ngumlandeli we-Snapdragon 660Njengoko utshilo uQualcomm. Kule meko, sifumana isizukulwana sesithathu injini yobukrelekrele bokuzenzela. Ke isantya solu hlobo lomsebenzi siphindwe kabini, xa kuthelekiswa nomprosesa wangaphambili. Ukongeza, inkampani ingenise imizobo emitsha kuyo, ekule meko yiAdreno 610. Sineprosesa entsha ye-DSP, eyiHexagon 686 ngeli xesha.
Ngale ndlela, ii-smartphones ezisebenzisa i-Snapdragon 685 ziya kuba nazo Ukusetyenziswa okungcono kwe-AI ekufotweni, ukuvula ubuso be-3DYazi izicatshulwa ngekhamera, njl. Nangona ukusetyenziswa kwale misebenzi kuya kuxhomekeka kumenzi ngamnye. Ngaphandle kwamathandabuzo, iprosesa entsha yeQualcomm ibizelwe ukulawula ibanga eliphakathi kwi-Android. Okwangoku asazi ukuba zeziphi iifowuni eziza kuyinyusa.
Iprosesa ebizwa ngokuba ithathe indawo yeSnapragon 710, iprosesa engabalulekanga kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu kwi-Android. Ngapha koko, izolo nje sayibona kwi-OPPO Reno. Ke le processor intsha yeQualcomm inomsebenzi onzima phambi kwayo. Kodwa iza nophuculo oluninzi, oza koyisa ngalo abavelisi kwi-Android.
Yiprosesa eyenziweyo kwii-nanometer ezisi-8. Njengakolu luhlu, ubukrelekrele bokuzenzela bubalulekile. Kule meko, isizukulwana sesine injini yobukrelekrele bungadityaniswa. Inamandla ngakumbi kunaleyo ifunyenwe kwi-Snapdragon 665. Ukongeza, kukho izinto ezininzi eziphuculweyo kuyo, njengoko kutyhilwe yiQualcomm uqobo.
Enkosi kule processor, sinayo Ukusebenza okungaphezulu kwama-35% kwi-CPU. Ukongeza kwi-25% yokusebenza okuphezulu kwimizobo. Kuya kuba nakho ukudlala kwimodi ye-HDR enkosi kuyo. Ukurekhodwa kwevidiyo ye-4K HDR, kunye nemowudi yemizobo, sele ixhaswe kwiifowuni eziza kuzisa lo msebenzi. Inkxaso yeekhamera ze-MP ze-48 nazo zazisiwe, ezifumana ubukho obuninzi kwi-Android. Ukongeza, sinokuqonda okunzulu ngokusetyenziswa kwamaxesha ama-4 asezantsi kune-Snapdragon 710.
I-Snapdragon 855 ngoku isemthethweni: Iprosesa entsha yokuphela okuphezulu
Ngelo xesha asazi ukuba zeziphi iifowuni ze-Android eziza kuyifaka. Nangona ibizwa ngokuba yiflegi yeflegi kuluhlu oluphakathi lweprimiyamu. Ngokuqinisekileyo iya kuba yinto ethandwa kakhulu phakathi kweempawu. Kodwa kuya kufuneka silinde ukuze sazi ukuba ngubani oyisebenzisayo.
Siphela ngeyona projekthi inomdla kakhulu kolu luhlu olusishiyelwe yiQualcomm. Ukusukela okokuqala, inkampani isungula ngokucacileyo kwicandelo lokudlala. Ukusukela kunyaka ophelileyo sinokubona ukuba ii-smartphones zemidlalo zivula njani isikhewu kwintengiso. Ngelixa zonke ziphezulu. Ngale Snapdragon 730G kufunwa ukukhuthaza olu hlobo lwefowuni kwamanye amacandelo, kodwa ngokusebenza kakuhle nakweyiphi na imeko.
Inguhlobo oluthile lwevithamini lweprosesa yangaphambili. Kuyo, iQualcomm yazise uthotho lwezinto eziphuculweyo, ezenza ukuba inike ukusebenza okungcono xa udlala imidlalo kwifowuni. Kwisandle esinye, Sifumana ii-cores ezisibhozo zeKyro 470 kuyo, ene-Adreno 618 GPU ngaphakathi, ukongeza kwiHexagon 688 DSP.Ukuze ikhowudi yobukrelekrele bokuzenzela ihanjiswe kuyo. Ukuhambelana ukuya kuthi ga kwi-8 GB ye-LPDDR4 RAM nayo iqinisekisiwe.
Inkxaso yekhamera ithembisa ukuba inomdla omkhulu. Ngenxa yokuba le Snapdragon 730G iya kuba nayo Inkxaso yee-sensors ukuya kwi-192 MP. Le yayiyinto ethi besele kuphawuliwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kwaye ngoku sele isemthethweni. Eminye, sifumana i-latency optimizer kwi-WiFi, ukusebenza okuzinzileyo xa udlala imidlalo, kunye nesantya esiphezulu sokulayisha imifanekiso, ukuze ube namava angcono.
Ngaphandle kwamathandabuzo, kuya kuba ngumdla ukubona ukuba zeziphi iifowuni ze-Android ezibeka le processor yeQualcomm. Okwangoku azikho iindaba malunga noku, okanye malunga nokuqaliswa kwayo kwintengiso. Kufanele ukuba kube kulo nyaka nangona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Snapdragon 665, 730 kunye ne-730G: Iiprosesa ezintsha zaphakathi kwebanga
Umdlalo weMoto G7 ufika eSpain ngokusemthethweni
Umphathi we-OnePlus uthi i-Crystal Gradient Colour Variants ayithengisi kakuhle